Abavelisi kunye nabaxhasi beFibre Optical
Isakhelo sokuhanjiswa kwefayibha (ODF), enye ebizwa ngokuba yipaneli yefayibha eyenzelwe ukusasaza, ukulawula nokukhusela ii-cores zefayibha ngexesha lothungelwano lomnxeba, kumagumbi ezixhobo zeCATV okanye kwigumbi lezixhobo zenethiwekhi. Ingasetyenziselwa ukujongana neadaptha eyahlukeneyo kubandakanya i-SC, ST, FC, LC MTRJ, njl njl izixhobo ezinxulumene nefayibha kunye neehagu zeehagu.
Ukujongana nezixa ezikhulu zefiber optic ngexabiso eliphantsi kunye nokuguquguquka okuphezulu, isakhelo sokuhambisa i-optical (ODF) sisetyenziswa ngokubanzi kwisinxibelelanisi kunye neshedyuli yefayibha ebonakalayo.
Ngokwesakhiwo, i-ODF inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezimbini, oko kukuthi i-rack mount ODF kunye nodonga lwe-ODF. I-Wall mount ODF ihlala isebenzisa uyilo njengebhokisi encinci enokufakwa eludongeni kwaye ilungele ukuhanjiswa kwefayibha ngamanani amancinci. Kwaye i-rack mount ODF ihlala imodularity kuyilo nolwakhiwo oluqinileyo. Ingafakwa kwirack kunye nokuguquguquka okungakumbi ngokokubala kwentambo ye-fiber optic kunye neenkcukacha.
Jera ifayibha optic isakhelo lonikezelo (ODF) yenziwe ipleyiti yesinyithi ebandayo-liqengqiwe iteknoloji ukutshiza electrostatic eye uzinzo egqwesileyo kokusingqongileyo kunye nesiqinisekiso ukusetyenziswa ixesha elide. IJera ODF iyakwazi ukufaka i-12, 24, 36, 48, 96, 144, i-fiber cores zonxibelelwano.
I-ODF sesona sakhelo saziwayo sokuhanjiswa kwefiber optic esinokunciphisa iindleko kwaye sandise ukuthembeka kunye nokuguquguquka kwenethiwekhi ye-fiber optic ngexesha lokuthunyelwa kunye nolondolozo.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi xa ufuna iinkcukacha ezithe vetshe malunga nezakhelo zokuhanjiswa kwefiber optic.
Ftth yokubeka intaba ifayibha isakhelo ulwabiwo optic, ...
Iphaneli yefayibha ebonakalayo, 1U-24-SC
19 yokubeka intaba ifayibha usasazo isakhelo 1U ...